sitrana SQL Server Data avy amin'ny rakitra Virtual Machine Disk Files, Files ary backup Files ary rakitra Disk Image
Home Products DataNumen SQL Recovery sitrana SQL Server Data avy amin'ny rakitra Virtual Machine Disk Files, Files ary backup Files ary rakitra Disk Image
Raha ny SQL Server Ny rakitra MDF / NDF dia voatahiry amin'ireto rakitra manaraka ireto:
VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) fisie (*. Vmdk). Mitahiry, ohatra, ianao SQL Server MDF / NDF fisie amin'ny kapila virtoaly ao amin'ny VMWare.
File Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. Vhd). Mitahiry, ohatra, ianao SQL Server MDF / NDF fisie amin'ny kapila virtoaly amin'ny Virtual PC. Na manao backup amin'ny anao ianao SQL Server Fisie MDF / NDF amin'ny alàlan'ny fiasa Windows Backup sy Restore.
ary tsy afaka miditra amin'ny data ao anaty rakitra MDF / NDF ianao noho ny antony sasany, ohatra:
Fafao ny SQL Server MDF / NDF fisie avy amin'ny kapila virtoaly ao amin'ny VMWare na Virtual PC.
Ny rakitra nomaniny ho solon'izay ao amin'ny media backup dia simba na simba ary tsy azonao averina amin'ny laoniny ny rakitra MDF / NDF.
Ny rakitra sary disk dia simba na simba ary tsy azonao atao ny mamerina azy io avy amin'ny rakitra MDF / NDF.
Avy eo ianao dia mbola afaka mamerina ny angon-drakitra ao amin'ny rakitra MDF / NDF amin'ny alàlan'ny fitiliana sy fanarenana ilay rakitra kapila milina virtoaly mifanitsy aminy, fisie rakitra na rakitra sary kapila misy DataNumen SQL Recovery. Safidio fotsiny ny rakitra kapila milina virtoaly, rakitra backup na rakitra sary kapila ho rakitra loharano hanamboarana, DataNumen SQL Recovery Hizaha maso ny rakitra loharano, hamakafaka azy, hamerina ilay SQL Server angon-drakitra voatahiry ao anaty fisie, ary avoakanao amina fisie MDF vaovao raikitra na rakitra fanambarana SQL tsotra izay azo ampiasaina hanamboarana ny angon-drakitra.
Raha toa ka voatahiry ao anaty kapila na kapila ny rakitra MDF / NDF anao, ary tsy afaka miditra amin'ny fisie MDF / NDF ianao noho ny antony sasany, ohatra:
Fafao ny SQL Server MDF / NDF fisie avy amin'ny kapila mafy na kapila.
Avy eo ianao dia afaka mampiasa DataNumen Disk Image hamoronana sary an'ny kapila mafy na kapila, avy eo avereno ny angona MDF / NDF amin'ny rakitra sary miaraka amin'i DataNumen SQL Recovery.